जवज मासिएको एमाले
जवज मासिएको एमाले - Nepal Talk
चैत्र १ गते, २०७७ मा प्रकाशित
आज भन्दा १२ बर्ष पहिले नेकपा एमालेको उछितो काढने आलोचनाहररु थुप्रै थिए । मैले अलि बढि सुनेर पनि नबुझेको आलोचनात्मक नारा चाँहि ‘नेकपा एमाले न पोथी न भाले’ हुनत तत्कालिन माओवादी र काँग्रेसहरु पनि उस्तै नारा र गालिबाट अछुतो त थिएनन् भन्न खोजेको होइन् । त्यतीखेर नेकपा एमालेमा लागेको ब्लेम गालि अहिले केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले सत्य प्रमाणित गरेको छ । यो कुरा उनै ओली आबद्ध पार्टिका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । कुनै पनि पार्टिको सिदान्त आफैमा नराम्रो हुदैन । पार्टिमा कस्ता व्यक्तिहरु हावि छन भन्ने कुराले उक्त पार्टिको छविसंग अर्थ राख्दो रहेछ । २०७५ सालमा माओवादि केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टिबिच एकिकरण भयो । दुइ अध्यक्ष बनायो पार्टिले तर एक अध्यक्षले एकात्मक शाशन शुरु गरे । एक अध्यक्षले सहमती विपरित पार्टिलाई आफनो मर्जिमा चलाए । फलत २०७७ फागुन २३ मा एकिकरण भत्काइीदियो सर्बोच्चले । दुई पक्षकै आफनो पुरानो पार्टि ब्यँुतियो । नेकपा एमालेका ओली खेमाले हर्षउल्लास मनायो । यता झलनाथ, रामकुमारी र माधब नेपालहरु ओलीसंग असन्तुष्ट नै छन । आफना पुराना समकक्षिहरुलाई उनले रिझाएर काम गर्न त सकेनन् नै उनले पार्टिको निति र नियम पनि पालना गर्न सकेनन् जसको परिणमत चौतर्फि आलोचना खेपिरहेका छन् ।
‘केपी ओलीलाई हटाएरै छोडछौ’ -झलनाथ खनाल
‘नेकपा एकिकरण भएपछि केन्द्रिय कमिटि बन्यो ।, केन्द्रीय कमिटिको निती नियमविपरित प्रधानमन्त्रीले हिड्न मिल्छ?, वँहाले प्लानिङ कमिटि गठन गर्दा,क्याबिनेट गठन गर्दा कसलाई सल्लाह गर्नुभयो ? यत्रा बिधि नियुक्ति गर्दा कोसंग सहमती गर्नुभयोे ? राजदुत नियुक्ती गर्दा कोसंग सहमती गर्नुभयो?’ नेता झलनाथ खलालले ओलीको सवालमा कुराकानि गर्दा प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘केपी ओली भन्दा अगाडि देखि हामी यो पार्टिमा लड्दै आएका छौ । नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीको सवालमा यसरी कटाक्ष गरेका छन् । पार्टि अध्यक्षले तानाशाहि चरित्र देखाएर नेकपा एमाले पार्टिको हत्या गर्न खोजेको उनको आशय छ । खनालले प्रधानमन्त्री ओलीसंग अब कुनै सहकार्य गर्न नसकिने बताए । एकात्मक शैली नसच्याएा उनलाई केन्द्रीय कमिटिले निष्काषण गर्न सक्ने खनालले बताए । एक टेलिभिजनमा अन्र्तवर्ता दिने क्रममा उनले भने,
‘केपी ओलीलले न प्रधानमन्त्री चलाउन सके न त पार्टि नै चलाउन सके त्यसैले केपी ओलीले अब छिटै निकाश दिनुपर्नेछ ।’ पार्टिमा एकलौटि ढंगले चलाउन खोजेकाले देश झन दुर्घटनातिर जान लागेको खनालले संकेत गरे । पार्टिलाई निकाश दिनका लागि केन्द्रिय कमिटिको बैठकले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न सक्छ खनालले बताएका छन् । ‘कालापानि अध्ययन गर्ने र नक्सा जारी गर्न लगाउने हामी थियौ, खनालले भने ।, नक्सा सार्वजनिक गर्न हामी लागिपर्याे तर वँहाले नक्साको विषयलाई गलत प्रचार गरे । केपी शर्मा ओलीले मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्न बिभिन्न बाहानाबाजीका कदम चालेको खनालको प्रष्ट्रयाए ।
मधेशि दल फुटाउन ओलीको अध्यादेश
केहि समयअगाडि दुइवटा अध्यादेश ल्याए । मधेशि दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउन के जरुरि त्यो विषयमा झलनाथ खनालले तत्कालै बिबिसीमा अन्र्तवार्ता दिएर बिरोध गरे । झलनाथ खनालले भने ‘आफुलाई सर्बेसर्बा नठान्नु तँपाईको भबिष्य अन्धकार हुनेछ ।’
नसच्चीएको ओलीको तानाशाहि चरित्र
पार्टिमा एकल निर्णय गरेर संसद बिघटन गरे । नेकपाका नेताहरु बहुमतिय खेमाले बिरोध गर्याे । अहिले सर्बाेच्चको नेकपा खारेजको निर्णयपछि नेकपा एमालले बाल’वाटारमा बैठक गर्दै आइरहेको छ । बालुवाटारमा होइन पार्टिको बैठक धुम्बाराहिमा राख्नुपथ्र्याे तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर झलनाथहरुले बैठक बालुवाटारमै राखेका छन् । स्थायि कमिट बैठक चलिरहेको छ । कुनै जानकारि छैन् । पार्टिले सबै कुरा गर्न सक्छ । पार्टि सर्बशक्तिमान छ । यत्रो ठुलो पार्टिले एउटा व्यक्तिलाई कार्र्वाहि गर्न नसक्ला त? यसको जवाफ समयले देला तर एउटै पार्टिभित्र बहुमतले मागेको कुरा लागु हुन सक्नुपर्छ । पार्टि नै भद्रगोल छ भने त्यस्तो पार्टिका नेताले देशलाई कुन भिजन दिन सक्ला? नेकपा एमालेभित्र ओलीले आत्मसमिक्षा गरे भने अझै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल नलम्बेला भन्न सकिदैन् । जे होस जनताले ओलीलाई बिश्वाश गरेका थिएनन् । जनताले नेकपा पार्टिलाई बिश्वाश गरेर मत दिएका थिए । जनताको मत उधारोमा खर्च गर्ने हक कसैलाई पनि हुदैन । उसै त एमालेले स्पष्टसंग आफनो कार्यशैली देखाएन भनेर आलोचना खेपिरहने एमालेमा लागेको दाग मेटिनुभन्दा पनि बल्झिएको छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको उक्त आरोप ओलीले सत्य कप्रमाणित गराएका छन् । बिपीले समाजवाद अँगालेका थिए भने मदन भण्डारीले जनताको बहुदलिय जनवाद जवज यहि जवज अहिले एमालेभित्र मासिएको छ ।